Ma jirtaa il-dhaqaale oo mudan in la maalgashado maanta Somaliland? (Qaybtii3aad) W/Q: Mukhtaar Cabdi Cilmi | Hangool News
Faa,iido intee leeg ayay u yelanaysa maalgashiga warshada Sibidhka ee Berbera
 Maalgalinta warashada sibidhka berbera: waxay ka qayb qadanaysaa korodhka dhaqaale eek u yimaada dhaqaalah guud somaliland (GDP)
 sidoo kale waxay kordhinaysaa dhaqaalaha ay ka helaan dadka shaqeeya(Disposable income) iyo kuwa ka siii baacmushtareeyaba.
 Shaqo abuuris balaadhan oo laga helo maalgalinta warshada sibidhka berbera iyadoo wakhtigii ay shaqaynaysay ay ka shaqayn jireen shaqaale ka badan 477 shaqaale hoosad ah iyo 60 khuburo ahaa taas oo maanta ay hubaal tahay in ka badan donaan tirade shaqaalaha warashada ka shaqayn doona maadama baahida sibidhka ee dalkeenu aad u badan tahay.
 Waxaa mesha ka baxaya sibidhkii dabada inoogaga iman jiray ee lacagta adag inagaga bixi jirty oo sanadkii ahaa 4,320.000 kish sanadkii ×$7 halkii kish maanta = $30,240,000, taa badalkeedana waxaynu inagu dhoofinaynaa xadi sibidha ah oo lacag adagi inaga soo gasho ( export promotion and import substitution)
Maxaa la gudboon shacabka Somaliland si looga faa,iidaysto badaheena?maxaase la gudboon dawladda Somaliland?
1) Dawalada Somaliland waa in ay saami ku yelataa warashada sibidhka ee Berbera diyaarisana sharciyadii lagu hagi lahaa nidaamka maamul ee warashada sibidhka ee berbera.
2) dawlada Somaliland waa in ay samayso sharciyada kala xadaynta ganacsiga Somaliland.
3) Dawlada Somaliland iyadoo dhiirigalinaysa wax soosaarka dalka waa in sibidhkii dabada inooga yimaada la joojiyaa taa badalkeedana kan dalka la dhiiri galiyaa.